के भए तापनि रूसमा जवान प्रतिभाशाली फुटबल खेलाडीले यस्तो भयंकर प्रतियोगिताको साथ एक पेशेवरको रूपमा बढ्न चाहन्छ? लिनुहोस्, उदाहरणका लागि, विचस्लावव करवाव। खेलाडीले एक तरिका देखाए। तर यो आफ्नो लागि कडा मेहनत गर्न इच्छुकहरू को लागि उपयुक्त छ। तपाईंले CSKA विद्यालयको यो विद्यार्थीलाई किन ध्यान दिनुपर्छ? भविष्यको लागि फुटबलरको लक्ष्य के हो?
जन्म वर्ष 1 990को जन्म, मूल मस्ककोभेट, करवाव व्योचेस्लाल सेगेसेविच उनको आमाबाबु को छह साल को उमेर मा सीएसकेए फुटबल क्लब मा दिइएको थियो। सेना टोलीको मुख्य टोलीले मात्र 2013 मा पराजित गर्यो। त्यो सिजनमा केवल चार खेलहरूमा मैदानमा बजाइयो, प्रतिस्थापनको लागि जाँदैछ। यो CSKA को रक्षा मा खेलाडीहरु मा कस्तो प्रकारको प्रतिस्पर्धा देखाउँछ।
स्केचलेभललाई युरोपेली टीममा खेल्ने इच्छाको बारेमा कोचलाई बताउँछ। यस समयमा मात्र यो अवसर दिइएको छ, किनभने डिफेंडर चेक क्लब "डुक्ला" लाई छोडिन्छ। कोच वाइचेस्लाभको अनुरोधमा सहानुभूति छ। 2013/14 को करवाव अर्को सीजन ऋण मा "डुक्ला" को रंग को रक्षा गर्दछ। उहाँ चेक गणराज्यको29 चैम्पियनशिप खेलको सबैभन्दा ठूलो लीगको यो बलियो मध्य-लीगको हृदयमा उभिएको छ।
अर्को सिजन, केटा फेरि फेरि चेक गणतन्त्र मा ऋण मा प्ले गर्दछ, तर पहिले देखि नै "Jablonec" क्लब मा डुबला संग तालिका मा अर्को स्थान लिन्छ। यस समय आधारमा29 खेलहरू दुई गोलले भ्याचेस्लाव करवावद्वारा मुकुट गरिन्छ।
त्यही समयमा उहाँ युवा र युवा युवाहरूलाई सधैं आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो, जसको लागि उहाँले धेरै दर्जन खेलाडीहरू खेल्नुभयो।
सीएसकेएको हृदयमा खेल्ने इच्छाको साथ 2016 मा पट्टेबाट फर्काउँदा, डिफेंडरले यो कुरा बुझ्नका लागि यो प्रतिस्पर्धाको लागि निकै गाह्रो हुनेछ। त्यहाँ प्राग "स्पार्टा" बाट प्रस्ताव छ।
छनौट किन स्पार्टा र चेक गणराज्यमा घट्यो?
वाइचेस्लाभसँग एक साक्षात्कारमा यो बारेमा सोध्दा, करवावले जवाफ दिए कि सबै भन्दा प्रगति को लागि उच्च गेम मा महत्त्वपूर्ण गेम अभ्यास छ। चेक गणतन्त्रमा, युवा खेलाडीहरू सङ्कलन गरिएका छन्, 17, 18 वर्षका लागि खेल खेल्न जारी। भ्याचव्लावले कोचको आत्मविश्वासलाई पनि आत्महत्या दिन्छन् - पछि अगस्त 2016 मा "स्पार्टा" लाई संक्रमण गर्दा उनले सबै 22 म्याचमा सबै90 मिनेटमा युरोपियन लीगमा7म्याच समेत खेले। यो प्लेयरको लागि एक धेरै ठूलो प्लस हो, किनकि उच्च स्तरमा खेल्नको अमूल्य अनुभव प्राप्त भयो।
सामान्यतया, चेक रिपब्लिकमा फुटबल स्तर एकदम उच्च छ, यद्यपि यो रूसी प्रिमियर लिगसँग तुलनात्मक छैन, तर यो FNL स्तर भन्दा उच्च छ। चेक च्याम्पियनशिप को एक विशेषता: लगभग कुनै legionnaires, विशेष रूप देखि महंगा। उच्च परिणाम उत्तीर्ण प्रशिक्षण को माध्यम ले प्राप्त गरिन्छ, जसको प्रति दृष्टिकोण धेरै गम्भीर छ।
प्राग "स्पाटार्टा", 1883 पछि विभिन्न नामहरूमा अवस्थित, सीएसकेएसँग धेरै समान छ:
मूलतः एक सेना क्लबको रूपमा कल्पना गर्थे;
प्रशंसकहरूको एउटै ठूलो सहयोग;
लामो र महिमा परम्पराहरू।
स्पार्टा युरोपमा एक प्रसिद्ध क्लब हो
यो उल्लेखनीय छ कि "स्पार्टा" चेक टोलीका बीचमा ट्राफिकहरूको संख्याको लागि पूर्ण रेकर्ड हो: 21 पटक चेकोस्लोवाकिया, 12 - चेको गणतन्त्रको चैंपियन च्याम्पियनशिप च्याम्पियनसिपले आफ्नो देशको कप 28 बार,2पटक - सुपर बाउल। च्याम्पियन लीगमा तेस्रो स्थानमा पुग्यो।
अब, सीजनको आधा बजेट पछि, प्राग टोली विश्वकप तेस्रो स्थानमा रहेको छ। युरोपको लीगको रेखाचित्रमा लगभग निरन्तर भाग लिन्छ।
युरोपेली लीगमा यो मौसममा नयाँ कोच डेविड गोलाबेकका साथ स्पार्टाले पहिलो स्थानबाट एउटा कठिन समूहमा आए, अन्तर मिलान (मिलान) र अंग्रेजी साउथअप्टनले घर धकेल्न, र इजरायली हापोले दुवै खेलहरू जिते। यस टूर्नामेंटमा, करवावले एक सहयोग गरे।
लक्ष्य र प्राप्त गर्ने तरिका
Vyacheslav संग एक साक्षात्कार (Karavaev यसलाई रेडियो प्राग दिनुभयो) हामी भविष्य को लागि आफ्नो लक्ष्य को बारे मा जान्छ, निकटतम संग शुरू:
युरोपियन लीगमा प्राग टोलीसँग जहाँसम्म पुग्नुहोस्;
चेक रिपब्लिकको च्याम्पियनशिप जित्नुहोस्;
यूरोपको शीर्ष टोलीमा जर्मनी, स्पेन वा इटालीमा प्ले गर्नुहोस्;
च्याम्पियन्स लिग जीत।
कारण विचलन, आफ्नो कामको लागि ईमानदार रवैया, जुन उहाँले कोचिंग स्टाफ र प्रशंसकहरुको विश्वास कमाउनु भयो, वाइसस्लाभले सफलताको लागि आशा गर्न सक्दछन्, हामी सबैको ईमानदार इच्छा चाहन्छौं। वाइचेस्लाभ आफैले भने भने, उनको लागि अब प्राथमिकता प्राथमिकता छैन (बाटोमा, स्थानान्तरण मूल्य 1 मिलियन यूरो भन्दा बढी थियो), तर अनुकूल प्रकाशमा देखाउन मौका थियो त्यसैले युरोपको शीर्ष क्लबहरूको स्केट्सले ध्यान दिनेछ।
डिफेंडर आक्रमणको उद्देश्य
यस खेलाडीको आधा खेलाडीको प्रदर्शनको प्रदर्शन गरौं। सीएसकेए मास्को (मस्को) ले च्याम्पियनशिपमा 13 खेल खेलेका छन्,9- कप (सबै9मिनेटको लागि),2गोल गर्यो, 8 सहयोग दिए। डिफेंडरको लागि असाध्यै राम्रो तथ्याङ्कहरू?
अब भ्यास्चलाव स्पार्टामा दायाँ-पछाडिको स्थितिमा खेल्दछ,4अंक भन्दा कम। उहाँसँग राम्रा गुणहरू छन्, आक्रमणसँग जोड्ने इच्छा छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, खेलको युरोपेली दृष्टिकोण, प्रशिक्षणको लागि गम्भीर मनोवृत्ति सिक्ने इच्छा, बिना सफल हुने।
यो दिलचस्प छ कि चेक रिपब्लिक आईएसपोर्ट को प्राधिकृत प्रिंट संस्करण Karavaev को 2016 को गर्मियों को लागि चेक रिपब्लिक को सबै भन्दा सफल अधिग्रहण को रूप मा जाना जाता छ। र यो सत्य हो, एक फुटबल खेलाडीको प्रगति नोटिस गर्न गाह्रो छ।
नेटवर्क एडप्टर Tunngle सुरु गर्न असफल भयो: के?